Fumana i-Origins ye-Fortune Cookies
Ziyolise nge Fortune Cookies
Iphi i-Fortune Cookies yaqala?
Ngubani odale i-cookie fortune yinto engacacanga. Ngaba i-cookie i-fortune ivela eChina, eHong Kong, eJapan, okanye eUnited States? Impendulo ayicacile, kuxhomekeke kubani ocelayo.
Imvelaphi ye-Fortune Cookies
Imilayezo efihliweyo ngaphakathi kweefake ibuye ibuyele kwii-13 kunye ne-14 enkulungwane eChina. Imilayezo efihliweyo kwiintsika zeNyanga ibuye ibaluleke kakhulu kwezopolitiko ekudalweni kweMing Dynasty.
I-cookie i-Fortune, njengoko isetyenzisiweyo namhlanje ingavela kubasebenzi baseTshayina abancedayo ukwakha umzila we-United States ngo-1849.
Imiyalezo evuyokileyo (iinqununu) yayibhakwa ngaphakathi kwiibisiki ezazidla ngokuhlwa emva kokusebenza nzima kosuku. Emva koko ii-cookie zentengo zaba yinto eqhelekileyo yokutya kwiiShayina kwi-Chinatown yeSan Francisco.
Ngaphambi kowe-1969 ii-cookie zamaxabiso zenziwe ngesandla, de kube yinkqubo yokuzenzekelayo yokuvelisa i-cookie i-fortune yenziwa kwi-US. Namhlanje, ezininzi zokutya zaseTshayina eUnited States, eCanada naseYurophu zinika ii-cookie zamaxabiso kubasebenzi babo ekupheleni kwesidlo. Kuya kuba yinto engavamile ukuba inikwe i-fortune cookie eChina. Umyeni wam kunye nathi sahamba ngeChina ngo-1988 kwaye sasingazange sibone okanye sidle i-cookie enye yexabiso.
Iintlobo zemiyalezo ye Fortune Cookie
Iimkhankaso zokuthengisa ishishini
Imitshato kunye nemikhosi yokuzalwa
Ukukhulelwa kwezibhengezo kunye nesini kubonisa
Amapolisa ase-HONG KONG awasebenzisa kwimikhankaso yeziyobisi
I-Fortune Cookies kunye nemiyalezo eqinisekisiweyo
I-cookie i-Fortune ayisetyenzisiwe njengezixhobo ezinamandla zokubhula.
Imilayezo engena ngaphakathi kwi-cookie i-cookie ithetha ukuba yinto ehlekisayo okanye indlela yokuvuselela umoya wakho. Ngokuqinisekileyo indlela eyonwabileyo yokwenza ingxoxo emva kokutya nabahlobo bakho. Ngokuqhelekileyo umyalezo oshicilelweyo uya kuba yixesha elizayo okanye isicatshulwa esidumile. Ngasemva komyalezo "amanani anenhlanhla" ngamanye amaxesha anikwa.
Nangona kunjalo, umyalezo we-cookie ungabonakala uchanekile okanye uqikelele.
Ndiyakhumbula iScottch ichukumisa i-cookie slip eprintiweyo ye-fortune ye-fortune ephezulu kwi-ofisi apho ndasebenza khona ukuze ndiyibone rhoqo. Ndahlala kule desiki iiyure ezisibhozo ngosuku, iintsuku ezintlanu ngeveki. Ndayigcina loo myalezo uhambelana nomatshini wam omshini ubuncinane unyaka kude kubekho amatshini okuchithwa athatyathwa ngamakhompyutha. "I-fortune" yam yayiyixela eliyinto endiyithandayo. Le minyaka yayidlulileyo! Le "thamsanqa" inokuba yinto yokuqala yokumisela inyaniso endandiyifaka ngayo ebomini bam. Kulungile, andiyikhumbuli ngoku, oko ndicinga ukuba kwakukhona into enokuyenza ngayo inenhlanhla kwimali okanye ukufumana uthando olugqibeleleyo.
Inkolelo: Yidla i Cookie Ngaphambi kokuba ufunde i Fortune
Omnye (ungayikhumbuli ukuba ngubani) wandixelele ukuba i-fortune efunyenwe ngaphakathi kwecookie yakho ayiyi kuzaliseka ngaphandle kokuba uyidla icookie ngaphambi kokuba uvule kwaye ufunde i-fortune. Andikhathalele ukutya i-cookie fortune (i-FYI-andiyi kuze ilahle i-cookie yeToll House) kodwa ukususela ekubeni ndivile ukuba, ngenxa yokuba ndiyakholelwa inkolelo, ndiya kuhlala ndiluma enye i-cookie yam inzuzo ngaphambi kokufunda umyalezo. Umyeni wam uyavuya ngokukhawuleza i cookie yam esele idibana kunye necookie yakhe.
Uyakuthanda ii-cookie ezikhethiweyo.
Izinzuzo zoPhulo lweMilambo
Ukuba ngumzali onomdla kumntwana wakho ongaphakathi
Ukuhlaziywa kweNcwadi yeMonster
Yayiyintoni Ingoma kuJohnnie Walker Commercial?
Iphasiwedi Ukukhusela i-Database Access
Yintoni i-Halal Certification?
Imvelaphi yobuGcisa yobuGcisa: Impressionism
Ukufa kunye nokuThengiswa kweMpahla
Injongo ye-420 ngokumalunga noMarijuana
Impembelelo yeNkolo yokuThula inkolo yobuYuda
Ingqungquthela kwixesha elithile lamaRoma
Ngaba uthelela ukuba ufuna ukuzithoba?
Itheyibhile yoTyunjwa kwiItransitive Vivere yesiTaliyane
I-10 Essential Columbian Salsa Songs
I-Science of Disgust
Uhambo lokuqala Lokuqala lukaSir Walter Raleigh e-El Dorado (1595)